घरमा कोही मानिस आउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई जबर्जस्ती लुकाइन्थ्यो (भिडियो) – Namaste Host
March 1, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on घरमा कोही मानिस आउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई जबर्जस्ती लुकाइन्थ्यो (भिडियो)
घरमा कोही पाहुना आउदा मलाई जबर्जस्ती लुकाइन्थ्यो,घरको इज्जत जान्छ भन्थे (१६ वर्ष अघिको भिडियो सहित) भिडियो तल राखिएको छ ।
करोडौं नेपाली जनताले रुचाएका प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईको जन्म नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा बि.सं. २०५० सालमा भएको हो । उनका बुवा आमा दुवै जना शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले त होला उनी सानै देखि चेतनसिल थिए । दुवै आँखा नभएका उनी जन्मजात नै यस्तै हुन् ।
रमेशले झापाको गह्रामुनीमा ५ कक्षा सम्म पढे । त्यसपछि उनी दृष्टिविहिन विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने पुर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालयमा पढ्न थाले । दृष्टिविहिन मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय भएकाले उनलाई त्यहाँ पढ्न पनि सजिलो भयो । उनी सानै देखि नै गीत संगीतमा पनि रुची राख्थे ।
दृष्टिविहिनहरुका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न कृयाकलाप गराउने भएकाले अन्य कृयाकलापमा पनि उनी सकृय थिए । उनले २०६९ सालमा एसएलसी दिएर प्रथम श्रेणिमा पास गरे ।
दृष्टिविहीन भएकै कारणले गर्दा उनी बेला बेला अपहेलना पनि सहनु परेको पनि बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा घर परिवारबाटै समेत अपहेलित भएको कुरा बताउँछ । रमेश भन्छन “मलाई घरमा कुनै नयाँ मानिस आए भने लुक्न लगाइन्थ्यो । तलाइ अरु कसैले देखे भने घरको इज्जत जान्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिइन्थ्यो ।”अब प्रस्तुत छ १६ वर्षअघिको रमेश प्रसाईको एउटा डकुमेन्ट्री भि”डियो ।
NMC हस्पिटल मेरो बुबाको मृ’त्युको जिम्मेवार छ ! आदर्श मिश्रा (भिडियो हेर्नुहोस्)